INDEX YEMAHARA - Geofumadas
Iri peji iri pasi pekuvakwa, kuitira kuti urongedze misoro yakashandiswa zvikuru muBlog; kunyange mune iyi iyi iwe unogona kuona inonyora mapurogiramu ose akambotaurwa nezveGeofumadas.
Kudzidzira uye mabhuku
Zvimwe zvinodhaka zveModDesk
Nzira yekuita nayo neArgGIS
Kuchengetedzwa kweGoogle Earth
Tricks for Cadastre
Tricks ne Microstation
Zvimwe Bentley michina
Conferences uye zviitiko
Nzira yekuzviita sei
Zvinyorwa uko zvinotaurwa
Zvaungaita sei ne gvSIG
Kudzidzira uye seminamato
Tricks ne technologies
GPS uye EQUIPMENT
Kuongorora uchishandisa AutoCAD
Kuongorora uchishandisa Microstation
Kutsvakurudza mabhuku uye zvidzidzo
Kushandisa GPS pafoni
Manuals uye zvidzidzo
15 Inopindura ku "INDEX yezviri mukati"
Manheru akanaka, iwe unogona kundiudza kwandinogona kuwana zvikamu zvehova nemigwagwa yeHonduras. Kana kuti ivo vanobva pamapeji ekupedzisira pamwe chete uye kubva kune geoportal yeI ICF.
zvakaoma izvo. Vangave vanobva chero kupi zvako munyika yese.
KUMBIRA, NDIRI KUITA UPRISTI ZVINOSVIBISA GEOMATICA, ME zvakapa zvemuchadenga mifananidzo HWASWEDERA FROM GOOGLE PANYIKA, ASI ZIVAI LOCATION venyu vari kuwedzera MEXICO, AS ungakurudzirwa LOCATION KWAKO?
Héctor Donato Montañez inoti:
Gumiguru, 2017 pa
Ndiri kuda kukuzivisa iwe kuti wakanganisa kutora paruzhinji nzira yakavanzika iri muCalle Pedro Echagüe Oeste N ° 149 uye iyo inotaurirana naCalle Sarmiento Norte uko kune gedhi rekuvanzika, ino saiti iri muguta reSan Juan - Capital wePurovhinzi yeSan Juan, Argentine Republic. Izvo zvekuti haina gedhi kuburikidza yakataurwa Pedro Echagüe mugwagwa hazvireve kuti zviri pachena. Naizvozvo, ndinokumbira kuti matanho anodiwa atange atorwa kuti aone kana zvandiri kutaura ichokwadi uye kana zviri izvo, ndinokumbira kuti mifananidzo yekutenderera ibviswe.
Iine iyo yekudzora template. Muchikamu chepamusoro pane chinongedzo.
nzira yekushandura rondedzero yepamusoro geographic inoenzanisa kusvika utm
November, 2016 pa
Iwe unofanirwa kunge uchitaura zvakanyanya.
Munowanzo, iwe unofanirwa kugovera urongwa hwehutano,
ipapo iwe unofanirwa kuutamisa kune inozivikanwa nenyaya yekuti, uye shandura iyo kana ichidiwa.
Nyora kwatiri mhariri (at) geofumadas. com uye isu tichatsanangura izvi zvakadzama.
Ndingataurire sei dxf file iyo isiri mumakorani mumamiriro ezvinhu akakodzera ehurumende? Ndinofunga ne microstation zviri nyore ... asi ini handizivi kuti sei ..
Ndine mhinduro, sezvandinoita kuti ndione maitiro asina kururama maonero nekunamata kuhutano hwemaji.
December, 2014 at
Kana uri kutaura pamusoro peHonduran mutemo:
- Ngatiti ivo vanotanga dare rekuongorora kwedhorobha mukati memakore maviri: Ndezvipi zvingashandisa? Kana vane tsika uye vasina kubvumirana, vangada kushandisa 100%.
Chii chinofanira kutarisira ndiyo inobvira inopikisa of Hwakakwirira Court of Vaongorori, kana musingadi kuratidza uchapupu tsika apera, zvingada kuti kuunganidza tsika nokuda 100%.
Chibvumirano chinoita basa, kuitira kuti chiitiko chacho hachisi chakakwirira, apo cadastre inodzidziswa.
Chimwe chiitiko, ndechipi rudzi rwekodhi yemitengo ndiyo iyo yavanoti vane? Icho chiri chezvivako, ine zvodhu zvino? Inosanganisira maguta emaguta here? Inosanganisira nzvimbo dzekugara mumaruwa uye mbeu dzekusingaperi?
Kana ivo vachangobva kugadzirira makatalogi, ane akagadziridzwa matanho. Kuvanyorera ku100% kunogona kukanganisa, nekuti vanhu, kana vakangojairwa kubhadhara neafidavit, kana kuti kana vasina kumbobhadhara, vachanzwa kurova kwakasimba. Izvi panzvimbo pekubatsirikana, zvinowedzera zvisingabvumirwe, nekuti vanhu vanongouya kudhorobha kuzoona kana vachinge vabhadhara, uye kana vaziva kukosha kuchangotenderera.
Saka, chii kuronga zvinodiwa. Vaviri kutsigira pamberi peTSC chiitiko chekuvhurika kanzuru, pamwe nekucushion kukanganisa kwehunyanzvi.
Yaredi Harobi Mejia Paredes inoti:
Mune mamwe maManisipati tine makatuni emakore mashanu 2015-2019 kukosha, asi zvakadaro hapana weUrban technical cadastral ongororo, zvichave zvakakodzera kuti Dhipatimendi reCadastre litange matanho ekubvumirana kweiyi tsika kana chii chingaite danho rakanaka kutora, muRural kune 30% ye tekinoroji yekuongorora, zvekuita mumamiriro ezvinhu akadaro.
LUIS ARMANDO ROJAS inoti:
Mangwanani akanaka, iyo kambani yandinoshanda, inofarira kuwana drone, ine multispectral uye kamera yemifananidzo, kusanganisira software yekuronga kwekubhururuka uye kuongorora kwemifananidzo, iyo inobvumira kuongorora kwezvirimwa uye zvipfuyo kuburikidza nekushandisa UAV Kuziva munguva chaiyo chimiro chemapurazi akasiyana nechinangwa chekuvandudza mashandiro avo, kuongorora kudzora kwezvipembenene nemhando uye hunhu hwekudiridza.
Ndinoda kuva nechinangwa chako
JOSE LUIS inoti:
Gumiguru, 2013 pa
vane chiitiko chinoratidzira mufananidzo cad the intersection yemiganhu kana polilineas kana Autocad kana MicroStation.
Ini ndinogadzira google hearth kml faira ine utm inoratidzira (20 point) uye identifier kune yega yega kuronga, ID8L980G 20.408165 -99.36207333 (identifier, latitude, longitude), iyo kml faira inogadzirwa mu utm 8L980G zone 14 Q 462223.62G XUMUMX X XUMUMX XXUM Asi pandichichishandura kuita dwg autocad chinondipa data mbiri dzakasiyana kune rumwe ruoko zvinongedzera uye kune rimwe divi zvinondipa mapoinzi, chii chiri kuitika ??????
Your kero e havazobvumirwi ichibudiswa.
3D Yekudhinda Kosi uchishandisa Cura
Iyi ndiyo yekutanga kosi kune SolidWorks maturusi uye akakosha ekumodhiza nzira. Ichakupa yakasimba ...
Microstation Kosi - Dzidza CAD Dhizaini
Microstation - Dzidza CAD Dhizaini Kana iwe uchida kudzidza kushandisa Microstation yeCAD data manejimendi kosi iyi ...